Araka ny fanazavan’ny sefom-pokontany ao an-toerana dia mbola nisy lohany io lehilahy io no hitan’izy ireo niankohoka teo amin’ny toerana nahitana ny fatiny. Noheveren’izy ireo fa mamo anefa io lehilahy io ary resin-tory ka tsy nisy taitra ny rehetra. Fotoana fohy taorian’izay tsy nisy lohany intsony ilay lehilahy ary efa rotiky ny alika ihany koa ny ilan-tsandriny. Tavoahangy kely iray nisy nuvan no hita teo akaikiny izay nanamarinan’ny rehetra fa namono tena ity lehilahy ity. Maty daholo ihany koa ireo lalimanga nanakaiky azy, tranga izay tena nampihoron-koditra tokoa. Nambaran’ny sefom-pokontany ao an-toerana fa tena nahazo vahana tokoa ny tranga tahaka izao tao amin’ny fokontany nisy azy hatramin’ny taona 2017. Farany teo, ohatra, dia fatin-dehilahy iray mpamily fiarakaretsaka no nisy nandefa tao anatin’ny vovon-dranon’olona vao hanamboatra trano teny an-toerana ka niteraka fofona maimbo be. Toraka izany koa ireo fatin-jazakely roa ka ny iray vao teraka satria mbola niaraka tamin’ny lamba namonosana azy. Efa avy nalevina kosa ny iray ka nisy namindra toerana. Tsiahivina fa tsy noraisin’ny dokotera tao amin’ny CSB II Anosiala ity razana ity, raha araka ny fanazavan’ny sefom-pokontany hatrany.